GrabaChat Inotora Kumba Kumusoro Kumusoro Kuremekedza paKutanga Kwevhiki | Martech Zone
Muvhuro, April 11, 2011 Svondo, October 4, 2015 Lorraine Bhora
NeChishanu, ndakanyora posvo pane yangu blog nezve Kutanga Svondo. Mariri ndakakurudzira vazhinji vevatori vechikamu kuti vave nehupenyu hunoshandura zviitiko uye pamwe:
Iva nebasa idzva
Iva nechidimbu chebhizinesi
Ona iro zano rekupenga rawakatsveta rive rechokwadi
Kune nhengo dzeChikwata GrabaChat icho ichokwadi chokwadi. Mubairo wavo wekuhwina chigadzirwa ndeyekurarama chat application, iyo iwe yaunogona kudzidza zvakawanda nezve apa: Grabachat . Ivo vave kutotanga kuburitsa imwe buzz uye ini ndinotarisira kuti tichava tichinzwa zvakawanda nezvavo, uye imwe makambani akavhurwa vhiki rino
Isu tinoshuvira kumhanyisa kana chimwe chiitiko chimwe gore rino. Mubvunzo chete ndewekuti iwe uchave wakagadzirira chiitiko chekuchinja hupenyu?
Ini ndango verenga inonakidza nyaya yekuti vamwe vevatungamiriri veWebhu 2.0 kufamba vava kutarisa vhidhiyo seinotevera midhiya yekukunda. Bandwidth mutengo uye tekinoroji ikozvino zvave kuita vhidhiyo kutenderera uye kuchengetedza zvakanyanya kudhura. Inonakidza kuona Grabachat pane cusp yeiyi.